Izitshalo zivezwa kakhulu yiqhwa ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uqaphele ngokuqinisekile ukuthi eminyakeni yamuva kunezihlahla, njengezihlahla ze-alimondi, eziqhakaza ngaphambi kwesikhathi sazo. Lokhu, okungaba umbukiso omuhle kakhulu, kungababangela izinkinga eziningi lapho kushaya isithwathwa, ngesizathu esilula sokuthi amangqamuzana akha amacembe awamelani namazinga okushisa aphansi. Futhi uma zingekho izimbali, ngeke zibe khona izithelo.
Ukuguquka kwesimo sezulu kuletha intwasahlobo phambili, kepha kuyisiphethu esinezimpawu ezifana nobusika, okungukuthi: isonto elilodwa i-thermometer ingafunda ama-degrees Celsius angamashumi amabili, kepha ngolunye usuku yehle iye kuma-degree amancane noma ayisithupha abulala amahlumela ithenda ethe xaxa. Ngakho-ke, izithelo zezitshalo zisengozini.
Ngokwesifundo esashicilelwe kulo magazini Nature nokuxhumana, izitshalo eYurophu iminyaka engama-30 ziqale kabusha ukukhula kwazo ezinsukwini ezintathu ngaphambili futhi ziphela ebusika. Lolu shintsho lubadalela amakhaza asentwasahlobo, okuyilapho izimbali namaqabunga zihluma khona. Ngakho-ke, lapho kuneqhwa, futhi kungabi ngisho neqhwa, baba buthakathaka kakhulu, kangangoba izimbali ziyakhipha futhi amaqabunga ayasha, noma awe ngqo, lapho isitshalo siphoqeleka ukusebenzisa amandla futhi ukukhiqiza okusha.
Isihlahla som-alimondi esivandeni sami. Isithombe sithathwe ngoJanuwari 20, 2018. Sasiqale ukuqhakaza ngomhla ka-8 kuleyo nyanga.
Ngokuphambene, e-Asia naseNyakatho Melika inani lezinsuku zezitshalo ezihlushwa yiqhwa belilokhu lehla, kodwa hhayi ngoba lezo zindawo ziyaphola kodwa ngoba ukufudumala kwembulunga yonke kunciphise inani lezinsuku ngonyaka lapho isithwathwa senzeka khona. Noma kunjalo, kube neziqephu lapho le ntwasahlobo iba nemiphumela emibi kakhulu: ngo-2007 kwakukhona isonto lamakhaza entwasahlobo enkabeni nasempumalanga ye-United States anciphisa ukukhiqizwa kukakolweni ngo-19%, amapentshisi ama-75% nama-apula nama-walnuts angama-66%.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izitshalo zivezwa kakhulu yiqhwa ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu